Munamato wekurapa kushushikana. ? Rwisa kushushikana uye kushushikana.
Munamato wekuporesa kunetseka. Kunetseka ndekwekufunga uko kunoshandura zvinhu zvakanaka muhupenyu zvikawedzera zvikonzero zvekushushikana nekutambura. Kana iwe uri munhu wekutenda kana kuti uchida kuve mumwe, isa muhupenyu hwako hwezuva nezuva a munamato wekuporesa kunetseka. Ingava mushonga wakanakisa wekubata nenguva dzekusagadzikana uye kupererwa.
1 Munamato wekuporesa kunetseka
2 Munamato wekuporesa kunetseka
3 Munamato wekuporesa kutenda chero nguva
4 Munamato wekuporesa kunetseka kwekukurumidzira
Tsananguro yesainzi inonyanyo shandiswa yekushushikana ndeiyi: ? Asi ikozvino unofanira kuzvibvunza kuti chii chinoita kuti unetseke uye kuti a munamato wekuporesa kunetseka unogona kubatsira. Nhasi, idzo mbiri dzinonyanya kukonzera kusagadzikana ibasa uye rudo rudo, nekuti idzi ndidzo nzvimbo mbiri dzehupenyu kwatinokurirwa uye tinotya kutadza. Dambudziko harisi kunetsa, dambudziko nderekuti kunyanyisa kunetseka uye kuzvipira kubasa uye hukama zvinotitadzisa kuva nehutano hwakanaka, kurara zvakanaka husiku uye kunyangwe kudya zvakanaka. Zvino zvauri kuziva zvakanyanya dambudziko rako uye nemabatiro aunoita hupenyu hwako, yave nguva yekuwana nzira yekudzora kufunganya uku mukati mako! Vazhinji vanotsvaga kurapwa, varapi vepfungwa, asi zvakare kune nzira inoshanda kwazvo yekutenda. Iwe unogona zvakare kutsvaga rubatsiro rwechiremba, asi kana ukabuda pamubhedha zuva rega rega kana iwe uchinamata munamato wekuporesa kunetseka, zuva rako rinenge rakajeka, nerunyararo rwemukati uye kuwedzera kunetseka kwemanzwiro.
“Ndinotenda, Ishe, kuti ndimi Mwari Baba Vemasimbaose, musiki wedenga nenyika. Ndinotenda muna Jesu Kristu, muponesi wevanhu vese. Ndinotenda kuMweya Mutsvene unotsvenesa. Ishe, nhasi tinokumbira nyasha dzekusununguka kubva mukufunganya matiri. Muzita raJesu, ndinunure kubva pakurwadziwa uku, ndinunure kubva mukushushikana uku. Ishe, dai simba renyu rinosunungura riburitse mweya wekupererwa, kubvisa zvisungo zvese nemhando dzese dzekuratidzwa kwekushushikana. Poresa, Ishe, uko iko kwakaipa kwakagara, bvisa dambudziko iri pamidzi yaro, poresa ndangariro, zvisina kunaka mamaki. Ishe Mwari, dai mufaro ufashukire mukati mangu. Nesimba rako uye muzita raJesu, remake nhoroondo yangu, yangu yapfuura uye yangu yazvino. Ndisunungurei, Ishe, kubva pane zvakaipa zvese, uye dai ndaporeswa uye ndosunungurwa muhuvepo hwenyu munguva dzekusurukirwa, kusiiwa uye kurambwa. Ndinoramba simba rinosunungura raIshe wedu Jesu Kristu, kushushikana, kusava nechokwadi, kusava netariro, uye ndakabatirira pasimba rake, Ishe, munyasha dzake. Ndipei, Ishe, nyasha dzekukusunungura kubva kunetseka, kushushikana uye kushushikana. Ameni. Kune imwezve munamato wekuporesa kunetseka iyo ipfupi. Unogona kunyora pasi papepa uye uzviite chero iwe paunonzwa kunetseka:
Munamato wekuporesa kutenda chero nguva
«Wamasimbaose Ishe, chikumbiro chine ruremekedzo uye pasina kutenda kwakaipa. Ndinokumbira runyararo, kuropafadzwa uye kunetseka kwako. Kuti upore, ndinokumbira kuti ubvise kushushikana uku. Ndinokutendai, ndichagara ndichionga kusvika kumagumo. Ameni.
Munamato wekuporesa kunetseka kwekukurumidzira
“Ishe, ndimi moga munoziva moyo wangu, saka nekutenda uye nekuzvininipisa, ndinokukumbirai kuti munyasha dzidzidze kuisa kunetseka kwangu nekutambudzika kwangu pamusoro penyu. Ini ndinoda kuzvisiyira mumaoko ako, kuvimba uye kumirira zvakadzikama kuita kwako muhupenyu hwangu! Sevha pfungwa dzangu, manzwiro angu uye pfungwa dzangu kuti ndisanetseka zvakanyanya. Ndibatsireiwo kuti pfungwa dzangu dzirambe dzakatarira pane zvakanaka kwandiri neHumambo hwenyu. Nditsvenese, kuti ndive munhu akazadzwa neMweya Mutsvene, kupenya rugare, kugadzikana uye rugare! Ndipe simba kuti ndigone kuchengetedza moyo wangu nemifungo yangu yakasimba nekutenda Mwari. Changamire, maita basa nekuti ini ndoziva kuti munondichengeta. Ndichaedza kutevera nhanho imwe neimwe yaunondiratidza inofanirwa kuti chirongwa chako chizadzikiswe muhupenyu hwangu. Ndinovimba nemi neshoko renyu. Ndinokupa kunetseka kwangu kose uye kunetsekana kwangu. Ndiporese kunetseka kwakanyanya. Ndinovimba uye ndine tariro mamuri. Ameni.